Fanorenana fotodrafitrasa marolafy :: Ho lasa tanàna maodely amin'ny fampandrosoana i Morondava • AoRaha
Fanorenana fotodrafitrasa marolafy Ho lasa tanàna maodely amin’ny fampandrosoana i Morondava
Tsy maintsy mandroso i Morondava», hoy ny ambentintenin’ny Filohan’ny Repoblika Rajoelina Andry, nandritra ny fihaonany tamin’ireo mponin’i Morondava, tamin’ny faran’ny herinandro teo.
« Tanàna maoderina sy mandroso ary ho maodely eo amin’ny sehatry ny fampan- drosoana eto Madagasikara eto aminareo », hoy izy.
Fotodrafitrasa maro no hapetraka ao amin’ity distrika lehibe ao amin’ny faritra Menabe ity, toy ny fanavaozana ny toho-dranon’i Dabaraha, izay miantoka ny fanomezam-boa ny fambolena ao Menabe. Eo ihany koa ny fanokafana an’ireo orinasa niroborobo tany an-toerana.
“Hatomboka tsy ho ela ny asa. Efa nanao ny tombana rehetra momba izany ireo iraky ny Vondrona Eoropeana. Isika anefa tsy hiandry ny famatsiam-bola avy amin’izy ireo fa avy hatrany dia hiasa”, hoy ny Filohan’ny Repoblika.
Hosokafana kosa ny orinasa mpamokatra siramamy (Sucoma) ao Morondava rehefa nikatona nandritra ny efa-taona noho ny olana ara-pitantanana nataon’ireo Sinoa, tany an-toerana. Nanome toky Rajoelina Andry fa hovahan’ny fitondram-panjakana avokoa ireo olana niteraka ny fikatonan’ity orinasa namokatra siramamy hatramin’ny 1 600 taonina isan-taona ity.
“Hojerena ihany koa ny hananganana orinasa hafa. Mba hahafahan’ireo mponina miasa sy ny mba tsy hanafarantsika siramamy any ivelany intsony”, hoy hatrany ny Filoha.
Rakibolana iray hetsy
Afaka volana vitsy dia tsy ho isan’ireo distrika mijaly amin’ny delestazy intsony i Morondava. Nisy ny fametrahana toby mamokatra angovo azo amin’ny herin’ny masoandro tany an-toerana, tamin’ny sabotsy teo, izay hamokatra herinaratra 3 mégawatt mba hamaly ny filàn’ireo mponina ao an-toerana.
Eo amin’ny sehatry ny fampianarana dia tafapetraka tamin’ny sabotsy teo ihany koa, tany Morondava, ny vato fehizoro hanorenana oniversite manara-penitra ho an’ireo zanaky ny faritr’i Menabe. Toy izany koa ny vato fototra hananganana Ceg manara-penitra.
Tsy diso anjara tamin’ny fahazoana fitaovam-pianarana maimaim-poana ireo mpianatra tao amin’ny Ceg sy ny Epp ao afovoan-tanàna. Nambaran’ny Filoha fa rakibolana miisa iray hetsy no hatonta hozaraina amin’ireo mpianatra Epp sy Ceg manerana an’i Madagasikara manomboka izao.
Velom-bolo manoloana an’ireo fanamby napetraky ny Filohan’ny Repoblika ireo ny mponin’ny faritr’i Menabe
Olana ara-pahasalamana :: Mitaky ny hanakatonana ny orinasa mpanao tara ny mponin’Ankazobe eny Alasora